शनिबार, कात्तिक १३, २०७८ बागेश्वरी पोस्ट
नेपालगन्ज । नेपाल आयल निगमले गएरातिदेखि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य बढाएको छ । निगमले खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेकोले घाटा कम गर्न निगमले स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ ले तोकेअनुसार पेट्रोलको रु १३३ कायम गरेको छ । त्यसैगरी डिजेल–मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु. तीनले बढेर रु ११६ पुगेको छ ।
आन्तरिक तथा बाहृय हवाई इन्धनमा साविकको बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रू. १० ले वृद्धि गरी आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर रु ९६ पुगेको छ ।
निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार गएरातिदेखि लागू हुने गरी मुल्य वृद्धि गरिएको निगमका सह प्रवक्ता पुस्कर कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एलपी ग्यासमा साविक बिक्री मूल्यमा प्रति सिलिण्डर रु. ५० वृद्धि गरी एक हजार ५०० कायम गरिने भएको छ । पछिल्लो पटक असोज ३० गते इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त मूल्य अनुसार निगमले मूल्य समायोजन नगर्दा १५ दिनमा रु. दुई अर्ब २२ करोड घाटा भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक १३, २०७८, ०७:५७:००